Camaliyad Istish-haadi Ah Oo Lagu Dilay Askar American Ah. – Calamada.com
calamada May 22, 2016 1 min read
Saacadihii lasoo dhaafay waxaa camaliyad Istish-haadi ah lagu galay saldhig weyn oo ciidamada Kufaarta Mareykanka ay ka sameysteen degmada Bagram oo ka tirsan gobalka Barwan ee dalka Afghanistan.
Camaliyada ayaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo uu ka xeynayay Mujaahid ka tirsan Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan’iyadoona la xaqiijiyay in gaariga uu ku qarxay gudaha saldhiga ciidamada Mareykanka.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in camaliyada lagu dilay 15 askari oo Kufaarta Mareykanka ah tiro kale waa lagu dhaawacay’sidoo kale camaliyada waxaa lagu gubay labo gaari oo nooca gaashaaman ah oo saldhiga dhex yaalay.
Dhanka kale diyaarad nooca qaada sahayda ciidamada NATO iyo kuwa daba dhilifyada maamulka Ridada Afghanistan ayaa kusoo dhacday qeyo ka mid ah gobalka Helmand’iyadoona la xaqiijiyay in gabi ahaan ay burburtay diyaarada iyo sahaydii ay waday’waxaa sidoo kale halaagsamay shaqaalihii diyaarada iyo saraakiishii la socotay.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 15-08-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 15-08-1437 Hijri.